२० मङ्सिर : मुस्ताङबाट यस वर्ष ६५ हजार मेट्रिक टन स्याउ निकासी भएको छ । स्याउ बेचेर कृषकले मुस्ताङमा रु साठी करोडभन्दा बढी रकम भित्र्याएका
२० मङ्सिर : पश्चिम नवलपरासीमा चार महिनामै ६७३ उद्योग दर्ता भएका छन् । घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयमा चालू आव २०७६-७७ को पहिलो चौमासिक अर्थात् साउनदेखि कात्तिकसम्ममै उक्त सङ्ख्यामा उद्योग
सुनसरीको दुहवी नगरपालिकाले बहुवार्षिक योजना अन्तर्गत रु एक अर्व २३ करोड ६४ लाखको विभिन्न चार योजना सार्वजनिक गरेको छ । ती योजनाहरुमा दुहवी नपा–७ मा रु ९३ करोड ३१ लाखको
काठमाण्डौँ,२० मंसिर । नेपाली बजारमा शुक्रबार सुनको मूल्यमा गिरावट आएको छ । विहीबार छापावाला सुन प्रतितोला ७२ हजार रहेको थियो । आज भने छापावाला सुन प्रतितोला तीन सयले घटेर ७१
काठमाडौं, २० मंसिर । परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले नेपाल भारतको सीमा विवाद समाधानको वार्ताको तयारी भइरहेको बताएका छन्। परराष्ट्र मन्त्री ज्ञवालीले सीमा बचाउ अभियानकातर्फबाट लिम्पियाधुरासहितको नक्सा हस्तारन्तण गर्न गएको टोलीलाई
काठमाडौँ, १९ मङसिर : के कमर्शियल बैंकको मुख्य काम नाफा मात्र आर्जन गर्नु हो ? होइन, भने अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी वढाउन ग्राहकलाई किन हौस्याइरहेका हुन्छन् ? यसको जवाफ सजिलो छैन
मदन खरेलको अर्को असफलताः ‘नेपाल एयरलाइन्स संसारकै खतरनाक एयरलाइन्स’
काठमाडौं, १९ मंसिर । नेपाल एयरलाइन्स हालैमात्र सँसारकै सबैभन्दा खतरनाक एयरलाइन्सको सूचीमा परेको छ । विश्वप्रशिद्ध फोर्बस म्यागाजिनले हालै प्रकाशित गरेको सन् २०१९ मा सँसारकै खतरनाक एयरलाइन्सको सूचीमा नेपाल एयरलाइन्स
काठमाडौं, १ढ मंसिर । फागुन मसान्तभित्र ५० प्रतिशत बजेट खर्च गर्नुपर्ने भएपछि विकास बजेट धेरै भएका मन्त्रालयलाई चुनौती थपिएको छ। चालु आर्थिक वर्षको चौमासिक प्रगति समीक्षापछि प्रधानमन्त्री कार्यालयले मन्त्रालयमा पठाएको
घुस सहित असई पक्राउ
काठमाडौँ, १९ मंसिर । शान्ति सुरक्षार्थ खटिएका प्रहरी सहायक निरीक्षक श्यामकुमार दाहाल घुससहित विराटनगरबाट पक्राउ परेका छन्। भारतबाट तरकारी ल्याउने व्यापारीसँग ७ हजार घुस लिइरहेको अवस्थामा रंगे हात अख्तियार दुरुपयोग
घोषणा भयो, कार्यान्वयन भएन
काठमाडौँ, १९ मंसिर । कर्णाली प्रदेश सरकारले गत असोज १ गते प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरमा भव्य कार्यक्रम गरेर प्रदेशका १७ लाख ७० हजार नागरिकको सामूहिक दुर्घटना बिमा गर्ने घोषणा ग(यो। आन्तरिक
काठमाडौँ, १९ मंसिर । दैलेख जिल्लाको भगवतीमाई गाउँपालिकाले श्रम रोजगार बैङ्कमार्फत युवालाई स्थापित गर्ने र डोजर विस्थापित नीति अगाडि सारेको छ । गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७६ र ७७ सुरु हुने